बिग्रिएको डीभीको वेबसाइट बन्यो, फारम भरिसकेकाले फेरि भर्नुपर्ने - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Milap Subedi | १ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:१३ |
१ कात्तिक, काठमाडौँ । डीभी वेबसाइटमा आएको प्राबिधिक त्रुटीका कारण सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमका लागि नयाँ फारम भर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ डीभी फारम भर्ने समय कार्तिक १ गते राति ९:४५ बाट मङ्सिर ६गते बुधवार राति १०:४५ सम्म कायम गरिएको अमेरिकी दूताबासले जानकारी दिएको छ ।
यदि तपाईंले यो बर्षको डीभी कार्यक्रमका लागि अक्टोबर १८ अगाबै आवेदन भरिसक्नु भएकोछ भने पनि त्यो आवेदन फेरि भर्नुपर्ने दूताबसले जनाएको छ। यो मितिभन्दा पहिले आवेदन भर्दा दिइएकोकन्फर्मेसन नम्बर पनि अब काम लाग्ने छैन।
यो कार्यक्रम र प्रकृयाको निष्पक्षताका लागि पहिले दिइएका आवेदनलाई मान्यता नदिइने दूताबासले स्पष्ट पारेको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति कार्तिक १ राति ९:४५ बाट मङ्सिर ६ गते बुधवार राति१०:४५ सम्म फेरि आवेदन दिनुपर्नेछ।
तर यस नयाँ आवेदन अबधिमा एकपल्ट भन्दा धेरै पटक आवेदन दिएमा तपाईं अयोग्य ठहरिनुहुने दूताबासले स्पष्ट पारेको छ।
तपाईँले डीभीका लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको २०१८ मे १५ अर्थात ०७५ साल जेठ १ वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु पर्ने दूताबासबाट जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
डीभीका लागि इच्छुक आवेदकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः
आवेदन नि:शुल्क हुनेछ । डीभी चिट्ठामा सहभागी हुनका लागि शुल्क लाग्दैन ।
• कन्सल्टेन्टको आवश्यकता पर्दैन। आवेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिने तर्फ विचार गर्न अमेरिकी दूताबासको अनुरोध छ । तर, सहयोग जसले उपलब्ध गराए तापनि आफ्नो आवेदनका लागि तपाईँ स्वयम् जिम्मेवार हुने दूताबासको भनाइ छ ।
• फारम अनलाइन भर्नुपर्छ । सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि आवेदकहरूले दर्ता अवधिमा www.dvlottery.state.gov मा गई इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डि.भी.)आवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ ।
• पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्छ । दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पति/पत्‍नी र आवेदनको समयमा२१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचीकृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई समावेशनगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ ।
एकजनाका लागि तपाईँले एउटा मात्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी आवेदन बुझाउने आवेदकहरू चिट्ठाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।
• हालसालै खिचिएको फोटो चाहिन्छ । अघिल्लो वर्षको डीभी आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यसवर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेलखाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ । फोटो खिच्दा आवेदकहरूले चश्मा लगाउनु हुँदैन ।
• आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुपर्छ । यो नम्बर नै तपाईँको स्टेटस चेक गर्ने एक मात्र तरिका हो ।
• तपाईँ डीभीका लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मे १५, २०१८ (जेठ १, २०७५) वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।
आवेदनदर्तागर्दा आवेदकहरूले आफ्नो ईमेल ठेगाना प्रदान गर्नुपर्नेछ । यद्यपि,छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू छानिएका छन् भन्ने व्यहोराको ईमेल सूचना पठाइँदैन ।
तपाईँ डीभी विजेताका रूपमा छानिँदैमा तपाईँले भिसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रत्याभूत गर्दैन । तपाईँले भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिने मौका पाउनुभयो भने कन्सुलर अफिसरले तपाईँसँग आवश्यक योग्यता छ वा छैन र अमेरिकी आप्रवासी कानुनबमोजिम डीभीका लागितपाईँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको निर्क्‍यौल गर्नेछन् । अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा आफूसँग लैजानुपर्ने दस्तावेजहरूको सूची https://go.usa.gov/xRuzM मा दिइएको दूताबासले जनाएको छ ।
डीभी कार्यक्रमसम्बन्धी थप जानकारीका लागि www.dvlottery.state.gov वा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट https://np.usembassy.gov/visas/immigrant-visas मा जान सकिन्छ ।
Previous‘नारी-पुरूषबिचको बिभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
Next‘चुनाव सर्नेमा शंका नगरौं, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ’ : निर्वाचन आयोग
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि बरिष्ठ न्यायाधीशको अभिलेख पठाइयो
१३ चैत्र २०७४, मंगलवार १८:४३
​रुँदै घर फर्किए बल टेम्परिङमा मुछिएका वार्नर !
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १८:१६
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:३१